Abaanduulaha CXDS oo sheegay in xal laga gaaray khilaaf ka taagnaa Gobolka Gedo |
Abaanduulaha CXDS oo sheegay in xal laga gaaray khilaaf ka taagnaa Gobolka Gedo
Abaanduulaha ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdirisaaq Khaliif Cilmi oo saddexdi cisho ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Dolow ee gobolka Gedo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Abaanduulaha ayaa intii uu ku sugnaa halkaasi waxa uu waqtigiisa ugu badan geliyay abaabulka howlgallada wejiga labaad ee deegaannada fara ku tiriska ee Gedo looga xoreynayo iyo xalinta xiisado dagaal oo dhawaan ka dhacay magaalada Beladxaawo ee gobolka Gedo.
Kulan uu u qabtay Jeneraal Cabdirisaaq Khaliif Cilmi qeybaha kala duwan ee bulshada Gobolka Gedo ayaa waxaa laga soo saaray afar qodob oo saldhig u noqonaya horumarinta iyo xasilinta gobolka Gedo oo uu ku sheegay in ay qeyb ka qaadan karto xalinta khilaafaad halkaasi ka taagnaa.
Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir kana mid ahaa Xildhibaannada dowladdii KMG ah ahayd oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan qodobada laga soo saaray shirka, islamarkaana ay gacan ka geysanayaan fulinta heshiisyadaasi.
Abaanduulaha ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdirisaaq Khaliif Cilmi ayaa intuu uusan ka soo amba bixin magaalada Dooloow kulan uu kula qaatay qeybaha bulshada ayaa kula dar daarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta gobolka.
Qodobadaasi lagu heshiiyay ayaa waxaa fulintiisa ka qeyb qaadan doona guddi abaanduuluhu u xilsaaray, waxaana socdaalkiisa uu qeyb ka yahay dadaallada ay dowladda ugu jirto dar dargelinta sidii dalka oo dhan looga xoreyn lahaa maleeshiyada Al-Shabaab.